Taariikhdii nololeed AUN Garaad Cabdulaahi Cali Ciid (dhegayso) – Radio Daljir
Taariikhdii nololeed AUN Garaad Cabdulaahi Cali Ciid (dhegayso)
Nofeembar 19, 2020 7:06 g 0
Alle ha u naxariistee Garaad Cabdillaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa issimada Puntland oo maanta ku geeriyooday dalka Turkiga, laguna wado in meydkiisa dalka loo soo qaado.
Alle ha u naxariistee waxaa subaxnimadii hore ee saaka ku geeriyooday isbitaal ku yaalla dalka Turkiga Garaad Cabdillaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa issimada magacweyn ee Puntland.
Garaad Cabdillaahi Cali Ciid ayaa muddooyinkii dambe ku xanuunsanaa dalka Turkiga oo loogu qaaday xanuun xagga kalyaha ah, hase ahaatee intii uu isbitaalka ku jiray ayaa waxaa ku sii dhacay xanuunka COVID19, inkastoo mar dambe la sheegay in uu ka soo kabsaday.
Daahir Yuusuf Cali Ciid wuxuu ka mid yahay ehelada Alle ha u naxariistee Garaad Cabdillaahi Ciid, wareysi uu siiyey warbaahinta Daljir ayuu uga warramay sida muddooyinkii dambe oo ahaa xaalka caafimaad ee Garaadka, geeridiisa maanta iyo taariikhdiisii nololeed wuxuu ka hayo.
Cabdifitaax Cumar Geeddi oo ku sugan istuudyaha Daljir ee Doolow, ayaa Daahir oo Badhan jooga telefonka ku wareystay.
Raadreeb 35 Wararka 26508